LA KULAN NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE TUFAAXA RANETKA - GEED GEEDEEDKA
Ranetka - Tani waa magaca caanka ah ee noocyo kala duwan oo ah noocyo isku dhafan oo geedo tufaax ah, laga helay natiijada ah ee taranta caan ah ee geedaha tufaaxa ee Europe leh kala duwan oo u dhaxeysa geedaha tufaaxa Siberian Berry. Natiijada ka soo baxda isbitaallada ayaa ah geedo yar yar oo kobcaya kuwaas oo si fiican ugu habboon cimilada culus waxaana lagu kala saaraa wax-soosaarka sare.
Nasiib darro, dhadhanka iyo tayada dibadda ee tufaaxaani uma oggola inay u kala soocaan noocyo kala duwan, waxay yaryihiin iyo, sida caadiga ah, dhanaan iyo tartiib. Kuwaas oo kale, waxaad karin kartaa noocyo kala duwan oo jammi ah, saxarado iyo jaraa'id, laakiin si wax ku ool ah miiska saaran ma shaqeyn doono. Laakiin dhirta tufaaxa ee noocyadani waxay ka badbaadi karaan miraha qaboobaha iyo dhaxanta guga lama filaan, waana tan faa'iidadooda ugu weyn. Waxaa laga dhigi karaa iyada oo aan lagu dhicin in Ranetki yihiin tufaaxa Siberia iyo Bariga Fog.
Ma taqaanaa? Guryaha oo dhan, noocyada Ranetki ma aha kuwo ka liita kiimikada, iyo mararka qaarkood xitaa ka badan noocyo badan oo farsamo. Gaar ahaan, tani waxay khuseysaa pectins, oo door muhiim ah ka ciyaara hababka dheef-shiid kiimikaadka, iyo, adigoo cuncunka dabiiciga ah, nadiifinaya jirka walxaha raadiyaha, cayayaanka, maadooyinka culus iyo waxyaabo kale oo waxyeelo leh.
Sida ku xusan, noocyada tufaaxa Ranetka waa kuwo badan, tixgelin kuwa ugu caansan.
Kala duwanaanshahan, oo ku leh muuqaalkiisa muuqaalkiisa Krasnoyarsk, waxa lagu kala saaraa waxsoosaar sarreysa (illaa 50 kg oo miro ah oo laga goyn karo hal geed xilliga xagaaga) iyo, sida dhammaan xubnaha noocyada, waxay leeyihiin hannaan adag oo jiilaalka ah. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka kale ee Dobrynya, waa in lagu sheegaa in geedka tufaaxan uu ku dhawyahay saameynta qashinka, marka lagu daro, wuxuu u dulqaadanayaa abaarta si fiicanna u koraa.
Dobrynya goosashada ugu horraysa waxay bixisaa da'da afar jir, miro miro waxay dhacdaa horraantii Sebtembar. Tufaaxa kala duwan ee noocaan ah waxay leeyihiin nolol adag oo dheer - waxay ku xiran tahay shuruudaha lagama maarmaanka ah, waxay sii wadi karaan tayadooda ilaa dhammaadka jiilaalka.
Dhibaatooyinka kala duwan ee kala duwan waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in geedku uu muujiyo sinnaanta sare ee geedka: sadexdii sanaba mar ayaa geedkii tufaaxa "ku nasanayaa."
Miraha Dobryni waxay leedahay qaab yar oo qulqulaya, cirifka, midabka maqaarku wuxuu ku dhowaad hal-cabbir dhar ah, jidhku waa cagaar, mararka qaarkood xididdada gaduudan. Tufyadani waa mid aad u casiir leh oo cufan leh, laakiin waxay leeyihiin dhadhan dhanaan oo dhererkoodu yar yahay (miisaankoodu waa in yar oo ka badan 10 g), sidaa daraadeed, waxaa loo isticmaalaa sida caadiga ah sida qalabka wax lagu karsanayo. Inta badan laga bilaabo Dobrynia tuujin juuska.
Apple Tree Wakhti dheer, laga yaabee, sharaxaadu waxay u egtahay midda geedaha tufaaxa quruxda leh: geed yar oo leh taaj oo ballaadhan, oo si ballaadhan loogu daboolay dhererka dhirta badan oo leh ubaxyo waaweyn oo cad, iyo ka dib - oo leh casaan yar oo casaan ama casaan ah.
Kala duwanaanshahaan waxaa laga helay Maraykanka sanadkii 1917, laakiin Ruushka Sibiri wuxuu aasaas u ahaa xulashada. In Russia, noocyo kala duwan ayaa sidoo kale loo yaqaan Kitayka, iyo sidoo kale geedaha tufaaxa Lilivistee, tan iyo caleemaha u eg sida geedaha boodhka, iyo miraha yar yar oo qaab ah ee ukunta sidoo kale u eg yihiin plomme. Magaca ugu weyn ee noocyada kala duwan ayaa sidoo kale helay muddo dheer, "qaab dheer" qaabka midhaha.
Dhirta Apple Loogu kobcayo kor ilaa shan mitir. Laamaha geedku way toosan yihiin, talooyinkuna way eegayaan.
MirahaSida dhirta yaryar ee kale, miisaanka tufaaxu waa caadi ahaan 11-16 garaam (waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, noocyada tufaaxa ee wakhti dheer, oo leh miraha waaweyn). Maqaarku waa siman yahay, guduudana leh buluug buluug ah. Hilibka tufaaxa wuxuu leeyahay midab cream ah, ka dib hurdi, iyo dhismo cufan, taas oo ugu dambeyntii noqotaa jilicsan iyo jajab.
Ma taqaanaa? Apple Tree Long waa warshad malab oo cajiib ah. Haddii aad ku beerato mid ka mid ah geedka tufaaxa ah, waxaad si weyn u kordhin kartaa dhalidda geedo kale oo miro ah.
Si ka duwan Ranetok kale, tufaaxa dhaadheer ee dhaadheer ayaa leh tayada sare. Maaha mid aad u badan, waxay leeyihiin hindiso khamri iyo caraf udgoon dhalaalaya.
Dhibaatada ugu weyn ee tufaaxa muddo dheer - nolol aad u yar. Waxay dhadhamin karaan oo keliya dhowr toddobaad ka dib goosashada (meel qabow iyo mugdi ah, midhaha ayaa la ilaalin karaa ugu badnaan laba bilood), sidaas darteed ujeedada ugu muhiimsan ee noocaani waa farsamada farsamada.
Toobashada Apple Macallimiin badan oo xagaaga dambe ah - dayrta hore. Midhaha ugu horeysa ee geedku wuxuu bilaabmaa da'da saddex jir, dhalidda waa ka badan tahay, laakiin aan joogto ahayn. Xilliga xagaaga, hal geed oo tufaax ah ayaa soo saara celcelis ahaan 175 kg miro, laakiin xaaladaha wanaagsan, natiijadan waxaa lagu kordhin karaa rubuc.
Dhirta Cagaarka dheer Dhibaatooyinka barafowga sare iyo qaboobaha ayaa lagu kori karaa gobollada beerta si aan fiicnayn u korin. Inkasta oo geed this tufaax this ma aha champion ee hardiness jiilaalka ka mid ah kuwa kale, waxay u soo kabanayaa si fiican ee kiiska ee barafoobay.
Ranetka Golden waa mid ka mid ah noocyada ugu jiilaalka-adag ee dhirta tufaaxa, sidoo kale waa caan ah sababtoo ah dhalidda aad u sareysa.
Tani waa geed xoog leh oo adag, oo gaadhaya toddobo mitir oo dherer ah.
Xilliga khudradda waxay ka bilaabmaa seddex ama afar sano oo waa mid deggan. Laga soo bilaabo hal geed waxaa badanaa suurtagal ah in la ururiyo illaa nus boqolkiiba oo yar yar (5-7 cm) miraha miisaankeedu yahay 10-15 g. Waxay ku xiran tahay cimilada, dalagyada beeraha ee bilaha Luulyo ilaa Sebtembar. Muuqaalka muuqaalka ah ee geedkan ayaa ah in tufaaxa badanaa la xiro qeybta sare ee laanta, iyaga oo u soo jiidaya dhulka, taas oo ay ku dheehan tahay geedka tufaaxa ah ee qaadaya muuqaal qadhaadh oo badan.
Tufaax waxay leeyihiin maqaarka dahabka ah iyo hilibka jilicsan ee jilicsan. Dhadhanka badiyaa waa cunto iyo tartiib, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa dhanaan-macaan. Waxaa loo adeegsadaa inta badan shaqaynta.
Sida kala duwan ee hore, Tufaax Golden Golden Tufaax yihiin kuwo aad u liita lagu keydiyaa, marka lagu daro, waxay leeyihiin u nugul in ay si xun u qadimeen, oo sidaas daraaddeed ma ay noqon kartaa dib ula soo beergooyska. Khasaare kale oo ka mid ah noocyada kala duwan waa iska caabinta saboolka ah ee qolofta.
Ranetka Krasnaya waa nooc ka mid ah tufaax yar yar oo la jajabiyey, oo loo isticmaalo in badan oo loo isticmaalo casiirka iyo nadiifinta.
Harvest geedkan wuxuu bilaabaa inuu keeno goor hore, mararka qaarkood sanadka soo socda ka dib markii la beero. Joogta ah ee fruiting waa mid deggan. Tufaaxu wuxuu u bislaaday tobankii sano ee la soo dhaafay ee bisha Agoosto - horraantii Sebtembar.
Peel off miraha Geedkani, sida magaca ayaa tilmaamaya, waa casaan mugdi ah, lakabyo, midab leh, casiir leh iyo istaarijin. Qaabka tufaaxu waa ku dhowaad kubadda saxda ah. Dhadhanka tufaaxa Casaan waa mid aad u fiican, dhanaan, oo leh murugo la ogaan karo.
Hardiness gaar ahaan jiilaalka gaar ah, oo ka mid ah kuwa kale, kala duwan tani ma istaagaan.
Laletino - maaha noocyo kala duwan oo suuqyada ah. Dhanka kale, waa geed yar, taajku waa wareegsan yahay, ma aha mid dhumuc ah.
Faa'iidada geela Laletino waa xilliga hore ee fruiting - marka ay gaaraan 2-3 sano, geedka horeba wuxuu soo saaraa dalag. Si kastaba ha noqotee, ka dib sanad kasta wax soo saar leh Laletino inta badan "ku nasan" sanadka soo socda. Miraha waxay u bislaadaan bilowga Sebtembar.
Tufaax yar yar, foomamka cirifka. Doogga waa casaan, ku dhowaad ciriiri, jidhka waa casaan, cufan iyo casiir leh, qoyan, macaan-macaan iyo dhadhanka.
Waa muhiim! Tufaaxa Lageino waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan suuqa. Waxa lagu kaydin karaa celcelis ahaan laba bilood, taas oo sidoo kale kala soocaysa wakiillada kale ee noocyada.
Kala duwanaanshaha waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid sareeya, adkeysiga qolofta waa mid sareeya.
Ranetka Crimson - wakiilka jiilaalka aad u adag-adag.
Ciriiriyeyaasha da'da yar ee bilawga ah ee udubdhexaadka (qiyaastii sanadka saddexaad kadib marka la furo), waxsoosaar sarraysa oo deggan. Tufaaxu waxay u bislaadaan qeybta hore ee Sebtembar.
Miraha tufaaxan wuxuu leeyahay kuwa yaryar, xitaa kuwa reaktorska, wax ka yar 10 g, qaab ahaan waxay u egyihiin sida tubta. Magaca noocyada kala duwan waxay u egtahay midabka maqaarka tufaaxa, muuqaalka dabeecadda sidoo kale waa ubaxyo nadiif ah. Jirka waa mid casiir leh, cufan, casaan midabka iyo macaan-macaan. Tufaaxu ma laha sifooyinka dhadhan sare oo loo isticmaalo walxo cayriin loogu talagalay diyaarinta noocyo kala duwan.
Faa'iidada tufaaxadan waxaa lagu wici karaa marka laga reebo nolosha shafka dheer. In meel qabow, raznetka Crimson qarsoon karaa, iyada oo aan leexin, ilaa guga guga.
Dhibaatooyinkaas oo dhan, waa Purple oo ah noocyada kala duwan ee jiilaalka-adag. Waxa kale oo ay u nugul yahiin inay guga gubaan iyo, sida xubnaha kale ee noocyada, waxay leeyihiin dhalid sare.
Fruiting geed ayaa dhacda marka uu gaaro da'da laba ama saddex sano. Goynta waxay dhacdaa bilowga Sebtembar. Waxaa suurtagal ah in la gooyo ilaa hal rubuc oo tufaax ah oo geed ka mid ah hal sanno wax soo saar leh, hase yeeshee, shucuur sare oo aan xasilloonayn, xilliyada caadadu waxay bilaabmaysaa inay si cad u muujiso da'da.
Qodbo dhoobo ah waa geedka khafiif ah ee dherer dhexdhexaad ah. Nolosha noloshiisa waa soddon sano ama ka badan.
Miraha yar (qiyaastii 9 g), waxoogaa yar ayaa la faafiyaa. Maqaarku waa guduud, labis, jidhku waa casiir leh, cufnaanta dhexdhexaadka ah, midabka - kareemka. Tufaaxu waxay leeyihiin dhadhan tartiib tartiib ah, sifooyinka suuqyada, iyaga oo u oggolaanaya in loo isticmaalo, ugu horreyntii foomka la farsameeyey. Intaa waxaa dheer, miraha aad u liita lagu kaydiyaa (ugu badnaan - laba bilood).
Waa muhiim! Faa'iidada ugu weyn ee Pursuit Purple ma aha miraha, laakiin iska caabin cudurada iyo qabow, iyo sidoo kale biqilka wanaagsan ee geedo iyo iswaafajinta aad u fiican oo leh noocyo badan oo geedo tufaax ah, oo ay ku jiraan kuwa caan ah. Sifooyinkaasi waxay suurtagal ka dhigayaan in si ballaaran loo isticmaalo Rugaha Purple sida sahayda xaaladaha cimilada ee adag taas oo badanaa dalbanaya geedo tufaax ah oo aan ku noolaan karin.
Apple Sibiryachka (magaca casriga ah - Beauty of steppe) waxay la mid tahay noocyo kale oo ka mid ah ranet ee sharaxaadda.
Geedka jeexan wuxuu ka yimaadaa sanadka saddexaad ama afaraad. Cuntada ma aha mid aad u sareeya sida suuqyada kale, laakiin geedka ma aha mid ka hooseeya jiilaalka-hardiness in ay congeners. Siberia waxay u muuqataa mid aan khatar u lahayn cudurada, gaar ahaan, qolof.
Tufaax Dhaqdhaqaaqyada waaweyn (mararka qaarkood ilaa 20 g), waxay leeyihiin muuqaal kubad, si tartiib tartiib ah ufilan, oo leh maskax yar. Diirka midhaha ayaa leh laba midab oo ah - midab jaalle ah iyo midab casaan ah. Hilib midab leh oo caano leh, casiir leh, macaan-macaan oo dhadhan. Iyadoo la'aanta qoyaan ee muddada miro-miro ee dhadhanka tufaax, xusuus qadhaadh ah ayaa u muuqda.
Beergooyska Siberian ayaa xilliga xagaaga dabasocda waxaa lagu kaydin karaa ilaa saddex bilood, iyadoo ku xiran xaaladaha lagama maarmaanka ah (qolalka madow ee madow).
Qaar ka mid ah siriyaanka kale waxaa lagu muujin karaa xaddiga juuska ee ku jira midhihiisa. Sida wakiillada kale ee noocyada, tufaaxan waxaa badanaa loo isticmaalaa shaqaynta, bataatiga la shiiday iyo casiirka badiyaa waxaa lagu qasay karootada iyo bocorka.
Kala duwanaanshaha noocyada kala duwan ee koritaanka dhexdhexaad ah waa natiijada ka soo baxda hawlaha Krasnoyarsk.
Geed qaabka istiraatiijiga ah, ma aha mid qaro weyn. Dalagyada beeraha ee bilowga Sebtembar. Wakhtiga khudradda ayaa bilaabmaysa da'da saddex sano, dhalidda geedo yaryar waa mid deggan, laakiin da'da, isbeddel xooggan ayaa bilaabmaya. Iyada oo hal geed ah xilli xili kasta xaalado dhexdhexaad ah, waxaad heli kartaa ilaa 20 kg oo miro ah.
Tufaax yar yar, celcelis ahaan 15 g, oval (halkan magac), si siman ula taabasho. Duufku wuxuu leeyahay midab casaan leh, kaas oo noqonaya mid aad u kacsan inta lagu jiro kaydinta. Jidhku waa hurdi-casaan, oo xididdada guduudan, ma aha mid aad u cufsan, laakiin marmarka qaarkood casiir leh. Dhadhanka tufaaxu waa macaan iyo dhanaan, ku dhawaad ​​dhadhan ma leh.
Faa'iidada tufaaxa waa inaysan haysanin hantida ay ka timaaddo geedka iyo si fiican si wanaagsan loo qaado. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan laba bilood.
Tufaaxada kala duwan ee laydhka waxay ku jiraan qadar aad u badan oo ascorbic acid ah oo leh sifooyin aad u fiican ee caanaha, taas oo ay ugu badan tahay in loo adeegsado warshadaha cuntada loogu talagalay diyaarinta miirka iyo nadiifinta, iyo sidoo kale diyaargaroow kale. Waxaa loo isticmaali karaa cusub.
Tilku waa noocyo badan oo jiilaalka ah. Geedka wuxuu u dulqaadan karaa heerkulka hoos udhaca afartan digrii, iyo xitaa xilliga dhaxan inta lagu jiro xilliga ubaxka, ku dhowaad nus nus dalagga. Geedka tufaaxa ah ayaa sidoo kale soo kabanaya ka dib markii lagu keydiyo oo aan saameyn ku yeelan qolofta. Si kastaba ha ahaatee, abaartu waxay u dulqaadaneysaa hargabka.
Ranetka Ambernaya sababtoo ah asalkeeda waxaa sidoo kale loo yaqaan Altai.
Tani waa dherer ballaaran, dherer ah, oo leh qaab geed oo aad u cufan. Mudada jirku wuxuu jiraa 30 sano, fruiting wuxuu ku bilaabmaa sanadka saddexaad, waxaana loo arkaa midabkiisa iyo xasiloonida.
Tufaaxu waxay u bislaadaan qeybta hore ee Sebtembar, waqtiga goosashada - illaa bil.
Cunto badan Amber kama badna 10 g. Tufaaxu waa mid isku eg, qaabab, midab maqaarku waa jaalle. Jirka sidoo kale waa huruud, cufan iyo casiir leh.
Dhaqdhaqaaqa tufaaxa ma ahan mid aad u sarreeya, waxay ka kooban yihiin astaamaha caadiga ah iyo sameynta baaritaanka. Waxaa inta badan loo isticmaalaa sida walxo ceeriin ah ee diyaarinta casiir, kaabayaasha, saxmadaha.
Amber - kala duwanaanta jiilaalka-adag ee tufaaxa. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan daaqsinka kale, noocyada noocaas ahi waa kuwo aan degganeyn cudurada kala duwan, inta badan dhirta tufaaxu waxay ku dhacdaa qolofta, kalluunka miraha iyo aboorada.
Ranetki - geedo qabow oo aan lahayn qabow oo aan qabyo ahayn.
Waa la kobcin karaa iyada oo aan ku haboonayn xaaladaha jawiga cimilada leh qaboobaha qaboobaha, iyo sidoo kale loo isticmaalo rootstock for geedo tufaax yar oo adag.